(Dhagayso) Dr Saacid Faarax Garaad oo ka hadlaya munaasabadii lagu magacabaay galabta. – Radio Daljir
(Dhagayso) Dr Saacid Faarax Garaad oo ka hadlaya munaasabadii lagu magacabaay galabta.
Oktoobar 6, 2012 11:56 b 0
Moqdisho, Oct, 06 – Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud? ayaa u magacaabay Ra?isulwasaaraha dalka Dr Saacid? Faarax Garaad.
Magacaabistan waxaa lagu shaaciyey munaasabad lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya,? ayadoo magacaabistaasina uu goob-joog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya? Mudane Maxamed Cismaan Jawaari.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Gudoomiye Maxamed Cismaan Jawaari oo labaduba wadajir uga hadlay Munaasabadda magacaabida ayaa u rajeeyey Ra?isulwasaaraha cusub ee dalka u horseedo hormar iyo barwaaqo, kana saaro dhibaatada hadda dalku ku jiro.
Ra?isulwasaaraha la magacaabay Mudane Dr Saacid? Faarax Shirdoon oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay inuu dhowaan soo dhisi doono golihii xukuumadda
Caawa + Daljir_Galkacyo, Sabti Oct C.risaq Silver .
NUSOJ oo deeq lacageed guddoonsiisay wariyaashii ku dhaawacmay ismiidaamintii guriga hooyooyinka Moqdisho.